Vaovao - Plastivision India 2020
Nanjing Beyou Extrusion Machinery Co., Ltd. manasa anao tamim-pahatsorana hitsidika ny trano heva ato amin'ny Plastivision India 2020 ho avy.
Booth No .: C2-5B
Fotoana: 16-20 Janoary 2020
Manampia: Nesco Complex, Western Express Highway Goregaon (E), Mumbai
Manantena ny hanana fifandraisana orinasa maharitra amin'ny orinasanao izahay amin'ny ho avy.
Amin'ny maha iray amin'ireo fampisehoana plastika matihanina 10 ambony indrindra amin'ny indostrian'ny plastika manerantany, ny India Plastics Fair tamin'ny taon-dasa dia nahatratra 100000 metatra toradroa ny velaran-tany fampirantiana 1.500 avy amin'ny firenena 25 sy mpitsidika matihanina 250.000. Ireo mpampiranty sy mpitsidika avy any Alemana, Britain, France, Portugal, Italia, Etazonia, China mainland, Taiwan, Korea atsimo, Japan, Singapore, Austria, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Myanmar, Thailand, Sri Lanka, ireo emirates arabo tafaray , Oman, Arabia Saodita, Nizeria, Afrika atsimo, Oganda, Tanzania sns sns amin'ny firenena mihoatra ny 30.
Fampidirana tsena: Ny famokarana plastika India, manomboka amin'ny famoahana 7,5 tapitrisa taonina ka hatramin'ny 15 tapitrisa taonina isan-taona dia ho lasa mpanjifa plastika fahatelo lehibe indrindra eran-tany i India, tetika lehibe ny indostrian'ny lasitra plastika. Ny fitomboana be amin'ny fanjifana polymer amin'ny tsena indiana dia hametraka an'i India ho tsena polymer mpanjifa lehibe indrindra aorian'ny Etazonia sy i Shina ao anatin'ny telo taona, miaraka amin'ny fampiasam-bola 25 000 crore (eo ho eo amin'ny RMB208,3 miliara). 1,3 miliara, ny fitomboan'ny indostrian'ny fiara, ny fitomboan'ny tinady ho an'ny kojakojan-tokatrano sy ny entan'ny mpanjifa, ny fampiroboroboana ny indostrian'ny sakafo sy ny fanontana ary ny fonosana dia nahatonga ny fitomboan'ny tinady ao an-toerana ho an'ny plastika, ary na ny akora na ny plastika. Ireo indostrian'ny fanodinana dia miorina tsara mba hiroborobo mandritra ny fotoana maharitra.
Ny tsenan'ny milina plastika any India dia manana fangatahana lehibe amin'ny milina plastika, toy ny: fangatahana farafahakeliny ho an'ny milina famolavolana tsindrona 25 000 unit, milina famolavolana 5000 unit, unité extruder 10.000. Fampiasam-bola avy any ivelany: India dia manana tontolon'ny fampiasam-bola mivantana tena tsara, ny fitoniana ara-toekarena amin'ny ankapobeny, ny fanalefahana ny tsena ary ny fanitarana ny fifandraisana ara-toekarena sy ara-barotra, ka nahatonga an'i India ho toerana fampidiram-bola manintona ho an'ireo orinasa manerantany.
Fotoana fandefasana: Jan-15-2020